Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Sweden Inowana Bato Idzva Rezvematongerwo enyika: Svenska Rikslagen
Sweden Inowana Bato Idzva Rezvematongerwo enyika: Svenska Rikslagen
Bato reSvenska Rikslagen rakanyoreswa kuSweden. Bato iri rakatarisana nekuvhoterwa muParamende yeSweden musarudzo dzaGunyana 2022.
Svenska Rikslagen yakagadzirwa mukupindura kumhinduro yehurumende yeSweden padenda reCovid.
Nemabviro kubva kumusangano weUN wekodzero dzevanhu uye nerutsigiro rwemitemo yenyika yeSweden, Svenska Rikslagen padanho rega rega, pamwe chete nevamiriri nemasaenzi, vachaongorora zviito zvevatungamiri vakasarudzwa uye pazvinenge zvichidiwa zvinoda mutoro.
Svenska Rikslagen anoronga kubvunza uye kuongorora:
• Kuve pamutemo kwekutonga kwepasipoti yekudzivirira
• Basa rine chekuita nezvirongwa zvekubayisa majekiseni rakanangana nevana nevechidiki
• Kusarura vanhu vasina kubaiwa nhomba
• Basa uye mabhenefiti ezvinokonzeresa majekiseni maringe nezvinokonzeresa
• The Lock-downs 'zvinokonzeresa hupfumi
Svenska Rikslagen haisiyanisi pakati pemadzinza, murume kana mukadzi, akabayiwa kana asina. Svenska Rikslagen ibato risina zvematongerwo enyika rinomirira vagari vese veSweden vanotsvaga chokwadi nekururamisira.
Nebato Svenska Rikslagen, vagari uye vanhu vanobva kumativi ese ehupenyu vanogamuchira nzvimbo yekuungana kuti vabatane uye vataure. Hazvisisiri nezvehutano hweveruzhinji kana kupatsanura vanhu kuita mapoka evakabayiwa uye vasina kubayiwa. Ndezvekubatanidza vanhu nekumiririra kodzero dzedu dzevanhu.
Cambodia Inotanga Gore Idzva Yakazvipira kuCarbon Neutralality na2050